किन बढ्छ अचानक मुटुको चाल ? « Farakkon
किन बढ्छ अचानक मुटुको चाल ?
मुटुको धड्कन छिटो-छिटो भयो भने वा अस्वभाविक धिमा भयो भने त्यसलाई राम्रो मानिदैन । यसले गंभिर रोगको संकेत गर्छ । मुटुको चालमा गडबडी भएमा त्यसले फोक्सो, कलेजो, मिर्गौला, मस्तिष्कलाई समेत प्रभावित बनाउँन सक्छ ।